अनुहारको छाला नबिग्रियोस्, बरु चमक बढ्दै जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हरेक महिलाले हरेक दिन ६ काम छुटाउनै मिल्दैन । यो ब्युटिसियनको सुझाब हो । अनुहारको छाला निकै कोमल हुने भएकाले बाहिरी प्रदूषण र शारीरिक भित्री अवस्थाको सीधा प्रभाव पर्छ । मेकअप नै नगर्नुहोस्, सामान्य गर्नुहोस् या भद्दा, यो आ–आफ्नो इच्छामा भर पर्ने कुरा हो । तर, छालाको सौन्दर्य जोगाउन केही काम भने तपाईंले गर्नैपर्छ । ब्युटिसियन सुष्मा महराका टिप्स यस्ता छन् : १. बिहान उठेपछि फेसवास गर्ने कुरामा कहिल्यै सम्झौता नगर्नुहोस् । हरेक दिन बिहान फेसवास गर्नैपर्छ । अनुहार बढी तैलीय छ भने आयल कन्ट्रोल फेसवास गर्नुपर्छ । यसको साथमा फेस स्कर्ब पनि गर्नुहोस् । प्वालहरू बढी खुल्ने खालको स्किन छ भने मसिनो दाना भएको स्कर्ब गर्नु राम्रो हुन्छ । यस्तो सुविधा भएको फेसवास नै बजारमा उपलब्ध छन् । ड्राई स्किन छ भने क्लिजिङ मिल्क फेसवास प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ ।
२. बिहान फेसवास र स्कर्ब गरिसकेपछि घरबाहिर जानु छैन भने कुनै फेस क्रिम प्रयोग नगर्दा पनि फरक पर्दैन । र, बाहिर निस्किनु छ भने सनब्लक क्रिम लगाउन कहिल्यै नभुल्नुहोस् । अझ, वाटरप्रुफ सनब्लक क्रिम लगाउनु राम्रो हुन्छ । सनब्लक क्रिमले घाम र धुवाँ–धुलोको रापबाट स्किन जोगाउने काम गर्छ ।
३. सनब्लक क्रिम युज गरेपछि आफ्नो आवश्यकताअनुसार मेकअप गर्न सकिन्छ । खासै मेकअप आइडिया नभएका तथा मेकअप खासै मन नपराउनेले हल्का फाउन्डेसन भने प्रयोग गर्नैपर्छ । अहिले सबैभन्दा राम्रो बिबी क्रिम नै छ । यसले मेकअपकै हैसियत पूर्ति गरिदिन्छ । बिबी क्रिम फाउन्डेसनको एडभान्स रूप हो । मेकअपले छालालाई बाहिरी कणबाट बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले यो हल्का भए पनि आवश्यक छ ।
४. दिनभर काममा निस्किँदा मेकअप लतपतिने खतरा रहन्छ । यसले पनि सौन्दर्यमा ह्रास ल्याउँछ । र, मेकअपले ठाउँ छोडेपछि छालामा बाहिरी असर पर्न सक्छ । त्यसैले पसिना निस्किँदा सोसाउन कम्प्याक्ट पाउडर र पफ ब्यागमै बोक्न भुल्नु हुँदैन । पफले पसिनामा हल्का टचअप गरिराख्नुपर्छ ।
५. बाहिरबाट बेलुका घर फर्किएपछि क्लिजिङ र फेसवास गर्न कहिल्यै छुटाउनु हुँदैन । छालाको बाहिरी पत्रमा दिनभर टाँसिएको बाहिरी फोहोर फाल्न ५–७ मिनेट क्लिजिङ गर्नुपर्छ । क्लिजिङपछि फेसवास गर्नुपर्छ ।
६. राति सुत्नुअघि हरेक दिन स्किन ब्यालेन्सिङ क्रिम लगाउनुपर्छ । फेसवास र क्लिजिङपछि पनि छालामा स–साना धुलोका कण रहने खतरा हुने भएकाले सुत्नुअघि यस्तो क्रिम आवश्यक पर्छ । धुलोको प्रभावलाई स्किन ब्यालेन्सिङ क्रिमले सामान्यीकरण गरिदिन्छ । छाला ड्राई प्रकृतिको छ भने सुत्नुअघि एन्टिरिङ्कल क्रिम पनि लगाउनुपर्छ । किनभने, फुस्रो छालामा चाउरी पर्ने खतरा बढी रहन्छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट ,सुष्मा महरा ब्युटिसियन, फेसियल हाउस काठमाडौं मल
Previous Articleकालो पोतो हटाउने उपाय यस्ता छन
Next Article यसो गर्दा छालाको सुन्दरता बिग्रिन्छ